January 2020 - Tameelay
ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်နဲ့မှ မဟုတ်ရင် ဘယ်အရာမှ ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကံ ပါလာတယ်ထင်တယ်
January 31, 2020 Tameelay 0
ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်နဲ့မှ မဟုတ်ရင် ဘယ်အရာမှ ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကံ ပါလာတယ်ထင်တယ် ကံစမ်းမဲ နှိုက်တဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူသုံးယောက် ဗလာတစ်မဲပဲပါတယ် ကဒ်သုံးကဒ်မှာ ကျွန်မသာ ဗလာရတယ် ထီထိုးတဲ့အခါ ကိုယ်ထိုးတဲ့ နံပါတ်နဲ့ တက်တက်စင်အောင် လွဲပြီးမှ ထွက်တယ် အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မကြိုးစားပဲနဲ့ ဘယ်အရာမှ အလကားရမလာတတ်ဘူး […]
မတော်စပ်ဖူးသော ဆွေမျိုးဟူ၍ မရှိ – သပြေကန်ဆရာတော်ကြီး
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတ္ထိပြည်၌ (သီတင်းသုံး) နေတော်မူ၏။ ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းတို့ကို”ရဟန်းတို့” ဟူ၍ ခေါ်တော်မူ၏၊ ရဟန်းတို့ သံသရာ၏ အစကို မသိနိုင်၊မသိမှု ‘ အဝိဇ္ဇာ’ဖြင့် ပိတ်ဖုံးအပ်ကုန်သည် တဏှာနှောင်ကြိုးဖြင့် ဖွဲ့ချည်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍ ဤဘဝမှ ထိုဘ၀ ထိုဘဝမှ ဤဘဝသို့ ပြေးသွားကျင်လည်ကြရကုန်သောသတ္တဝါတို့၏ ရှေ့အစွန်းသည် မထင်နိုင်။ ရဟန်းတို့ […]
ငွေရှာပါ . . . ငွေမရှိရင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့နောက်မှာ ပြတ်တောက်သွားမယ့် ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိနေတတ်တယ်
January 30, 2020 Tameelay 0
ငွေရှာပါ . . . ငွေမရှိရင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့နောက်မှာ ပြတ်တောက်သွားမယ့် ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိနေတတ်တယ် ငွေဆိုတာ ဒုတိယဘုရားသခင်လိုပဲ နေရာတကာမှာ သူပါမှပြီးတဲ့ နေရာတွေချည်းပဲလေ လူတွေဆိုတာကလဲ သူတို့လိုချင်တာတွေ ရှိနေ ရနေမှ အနားကပ်ချင်ကြတာလေ ။ ငွေရှာပါ . . . ငွေမရှိရင်ဆိုတဲ့ […]
လူတချို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲကို ကိုယ်ချင်းစာတရားလေး နည်နည်းလောက် ထည့်ပေးချင်တယ် အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး ငါသာ သူ့နေရာမှာဆိုပြီး တွေးတတ်စေချင်ရုံလောက်ပါ လုပ်ပြီးသွားမှ ငါမှားလေခြင်းဆိုတဲ့ နောင်တရနေတာထက်စာရင် မလုပ်ခင် မပြောခင်ကတည်း သူ့ဘက်ကိုယ့်တွေးတတ်ရင် တစ်ဖက်လူလဲ နာကျင်စရာ မလိုတော့ဘူးလေ လူတချို့ရဲ့ မျက်လုံးလေးကို နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ် အကောင်းမြင်တတ်စေချင်တယ် အများကြီး မဟုတ်ပါဘူး နေရာတကာ […]
အဆင်ပြေပါတယ်လို့ပဲ ညာပါ ကိုယ်အဆင်မပြေလို့ပဲ ပျော်မယ့်လူတွေချည်းပဲ ဘယ်သူမှ မင်းကို စာနာ နားလည်ကြမှာမဟုတ်ဘူး
ရေနစ်သူကို လက်ကူပေးတဲ့ခေတ်က ကုန်သွားပြီ ရေနစ်တဲ့သူကို ဝါးကူထိုးဖို့ စောင့်နေကြတာချည်းပါပဲ အမှားတွေ ရှိလာတဲ့အခါ အမှန်ပြင်ပေးဖို့ ဘယ်သူမှ စိတ်ကူးမရှိတော့ဘူး အဲ့ဒီအမှားအပေါ်မှာပဲ ထပ်ထပ်ပြီး အပြစ်တွေ ရှာလိမ့်မယ် မြေနှိမ့်ရာ လှံစိုက်တာထက် ပိုဆိုးတဲ့ အဖြစ်တွေပေါ့ နိမ့်ကျနေတဲ့အခါ ဆက်ပြီး ချနင်းသွားမှာပဲ ဘယ်သူကမှ လက်ကမ်းပြီး ဆွဲတင်မနေတော့ဘူး […]
ငွေ . . . ပါးစပ်ပေါက်မပါပေမယ့် သူပါမှ အရာရောက်တဲ့နေရာတွေမှ အများကြီးပဲ
ငွေ . . . ပါးစပ်ပေါက်မပါပေမယ့် သူပါမှ အရာရောက်တဲ့နေရာတွေမှ အများကြီးပဲ ရှာတုန်းကသာ မနည်း ကုန်းရုန်းပြီးရှာရတာ ပြန်ထွက်သွားဖို့ကျတော့ လွယ်လွယ်လေးပဲ ငွေဆိုတာ အရာရာမဟုတ်ပေမယ့် သူမပါတဲ့အရာတွေကလဲ တော်တော်ကို ရှားပါလာပါပြီ ငွေ နဲ့ မေတ္တာကို ဝယ်လို့မရဘူး ငွေရှိရင် ဘယ်သူမဆို အနားမှာ […]
ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ကြည့်တတ်အောင် ကြည့်ပါ အတ္တတွေနဲ့ ငါဖို့ ငါ့ဖို့လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး
ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ကြည့်တတ်အောင် ကြည့်ပါ အတ္တတွေနဲ့ ငါဖို့ ငါ့ဖို့လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး ပေးဆပ်သူတို့ နှလုံးသားဆိုတဲ့ အမည်ခံဟာ ကြားလို့ပဲ ကောင်းတယ် တကယ်တမ်းကျတော့ ခံစားရတော်တော် ခက်တဲ့အရာမျိုး ။ လိုချင်နေလျက်နဲ့ မပိုင်ဆိုင်မှန်းသိလို့ စွန့်လွှတ်ပစ်လိုက်ရတဲ့အခါ သွားချင်ပေမယ့် မခေါ်ချင်မှန်းသိလို့ ရပ်တန့်ပစ်လိုက်ရတဲ့အခါ ဘာမှ မဖြစ်သလို […]
ရှင်သန်နေချိန်မှာ အနည်းဆုံးတော့ လိပ်ပြာလုံချင်တယ် အဲ့တာကြောင့် ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ မယုတ်မာဘူး
ရှင်သန်နေချိန်မှာ အနည်းဆုံးတော့ လိပ်ပြာလုံချင်တယ် အဲ့တာကြောင့် ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ မယုတ်မာဘူး စိတ်ထားကောင်းကောင်းထားတယ် မတန်တဲ့လူက အချိန်တန်ရင် ထွက်သွားကြမှာပဲ အဓိကက ကိုယ့်ဘက်က မေတ္တာမပျက်ဖို့ပဲ လိုတာပါ ကိုယ့်စကားတစ်ခွန်းကြောင့် သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်စေဘူး ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ပဲ လျှောက်တယ် အမြင့်ရောက်ဖို့ တစ်ခုတည်းအတွက် တစ်ခြားသူတွေရဲ့ဘဝကို နင်းမသွားတတ်ဘူး ဘဝမှာ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် […]
ရင့်ကျက်ဖို့အတွက် အသက်အရွယ်နဲ့လဲ မဆိုင်ဘူး ဖိုမ သဘာဝနဲ့လဲ မဆိုင်ဘူး
ရင့်ကျက်လာတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဟန်ဆောင်တတ်လာတာပါပဲ တစ်ခုခုကိုတမ်းတမ်းစွဲလိုချင်ပေမယ့် မျက်နှာလွဲ ဂဲပစ်ပြီး မလိုချင်ပါဘူးလို့ ခပ်တည်တည်ညာနိုင်တာမျိုးပေါ့ ကိုယ်တကယ် လိုချင်ပေမယ့် ကိုယ်မရနိုင်မှန်းသိတဲ့အခါ မလိုချင်ပါဘူးလို့ ညာရတာလဲများပြီလေ ဒါကိုပဲ ရင့်ကျက်လာလိုက်တာလို့ ခေါင်းစဉ်တွေ တပ်လာကြတာ ရင့်ကျက်ဖို့အတွက် အသက်အရွယ်နဲ့လဲ မဆိုင်ဘူး ဖိုမ သဘာဝနဲ့လဲ မဆိုင်ဘူး ရင့်ကျက်လောက်တဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပဲ […]
စကားနည်းနည်းပြောပြီး များများနားထောင်တတ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်
ကိုယ့်လို နာကျင်သွားမှာစိုးလို့ ပြန်ပြီးမပြောဖြစ်တဲ့ အခိုက်အတန့်ဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိပါတယ် စကားလုံးတစ်လုံးကို မြိုချပစ်လိုက်ရုံနဲ့ အစာအိမ်နာသွားတာမှ မဟုတ်ပဲလေ လူအများကြီး သိစရာမလိုတာကို လူအများကြီးကို ပြောပြစရာမလိုဘူး ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိတာကိုလဲ အာပေါင်အာရင်းသန်သန် ပြောပြနေဖို့ မလိုပါဘူး တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ပြောပြလာတဲ့အခါ ကိုယ့်မှာလဲ စောင့်ထိန်းရမယ့် တာဝန်ဆိုရှိလာပြီ […]